DC စတူဒီယိုမှ ဖြန့်ချိခဲ့သည့်် ရုပ်ရှင်များထဲတွင် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး အဖြစ် Aquaman ထိပ်ဆုံးသို့ေ? - Yangon Media Group
DC စတူဒီယိုမှ ဖြန့်ချိခဲ့သည့်် ရုပ်ရှင်များထဲတွင် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး အဖြစ် Aquaman ထိပ်ဆုံးသို့ေ?
နယူးယောက် ဇန်နဝါရီ ၆- ‘Aquaman ရုပ်ရှင်သည် DV ၏ ရေကန်ကြီးထဲမှ ငါးအကြီးကြီးတစ် ကောင်ကို ဖမ်းမိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ မင်းသားဂျေဆန်မိုမိုအာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားသည့် ယင်းစူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်တွင် ကမ္ဘာ့ရုပ်ရှင်ရုံဝင်ငွေစာ ရင်းတွင်“Batman Vs Superman: Dawn of Justice” နှင့် “Wonder Woman” ရုပ်ရှင်တို့ကို တရားဝင်ကျော်တက်သွားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် DCEU ဟုခေါ်သော ရုပ်ရှင်ပရောဂျက်များထဲတွင် ရုံဝင်ငွေအကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
“Aquaman” ရုပ်ရှင်သည် သီတင်းနှစ်ပတ်ကျော်အတွင်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ ရုံဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၈၈၇ သန်းရရှိထားပြီး ဖြစ်သည်။ လက်ရှိမှစတင်ကာ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ ရရှိလိမ့်မည်ဟုလည်း ခန့်မှန်းထားသည်။ ကမ္ဘာ့ရုံဝင် ငွေစာရင်းတွင် အများဆုံးအုပ်စီးမိသည့် မြောက်အမေရိကဈေးကွက်ထက် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရုပ်ရှင်ဈေးကွက်တွင် အထူးအောင်မြင်မှုရခဲ့သည်။ ဝင်ငွေအား လုံး၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် နိုင်ငံတကာမှ ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရိုက်ကူးကုန်ကျစရိတ် ဒေါ်လာသန်း ၁၆ဝ မှ ၂ဝဝ ကြားသာရှိသော ယင်းရုပ်ရှင်သည် ဒေါ်လာ ၈၈၇ သန်းရရှိထားပြီဖြစ်သည့်အတွက် အခြေ မလှဖြစ်နေသော DC အတွက် အားတက်စရာဖြစ်သည်။ “Batman vs Superman” ရုပ်ရှင်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ ဒေါ်လာ ၈၇၃ ဒသမ ၆ သန်း ရရှိခဲ့ပြီး “Wonder Woman” ရုပ်ရှင်သည် ဒေါ်လာ ၈၂၁ ဒသမ ၈ သန်း ရရှိထားသည်။ နောက်ဆုံး ဖြန့် ချိထားသည့် Warner Bros ၏ စူပါဟီးရိုး ရုပ်ရှင်သည် DCEU အတွက် ဆဌမမြောက်ရုပ်ရှင်ဖြစ် သည်။
မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား လေအိတ်ရထား ပြေးဆွဲလာမှုကြောင့် မြစ်ဆုံ-မန္တလာ ရထားလက်မှတ်ရောင်းအား ထက်ဝက??
''သမာအာဇီဝကျတဲ့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ကပုံနဲ့ ကျော်ကြားတာဖြစ်တာကြောင့် ကျေနပ်တယ်။ ကိုယ်ဝတ်ထ
ကျုံးပတ်လည်ရှိ လမ်းများပေါ်နှင့် လမ်းလယ် ကျွန်းများပေါ်တွင် ကျူးကျော်ဈေးရောင်းချပါက ချက်??